Xasan Sheekh “Qof ka jawaabi karta ma lahan in ay doorasho dhaceyso iyo nooca doorasho” – Kalfadhi
Xasan Sheekh “Qof ka jawaabi karta ma lahan in ay doorasho dhaceyso iyo nooca doorasho”
July 21, 2020 July 21, 2020 Hassan Istiila
Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran gaar ahaan Madaxweyneyaashi hore ee dalka Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo manta shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Mogadishu ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan fatahaadaha Wabiga Shabelle iyo shirka Dhuusamareeb.
Hoggaanka ayaa baaq adag oo la xiriira gurmadka fatahaadaha u diray dadka Soomaaliyeed, hey’addaha samafalka, Dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaa ay xuseen in dad badan oo Soomaaliyeed ay u baahanyihiin gurmad deg-deg ah.
Maanta qof si rasmi ah ugu jawaabi karo ma jirto Doorasho ma dheceysaa? Sidoo kale qof ka jawaabi karta ma jirto waa tee nooca doorasho, doorashada yaa muumulaya lama garanayo? ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Farmaajo, ayaa dhowr jeer ku celiyay in ay qaban doonnaan doorasho Qof iyo Cod balse xisbiyada iyo qaar kamid ah maamul-gobolleedyada ayaa ku gacan seeray doorasho Qof iyo Cod ah iyadoo aan muddo kororsi la sameynin.
Baarlamaanka Puntland oo 22 sano kaddib ka dooday dhammeystirka xubnaha Maxkamadda Dastuuriga ah